Andrew Demeter: မီဒီယာအသစ်၊ ဖြစ်နိုင်ချေအသစ်များ - ဆယ်ကျော်သက်နိုင်ငံရေးလွှမ်းခြုံမှုနှင့် IBC 2014 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » အင်ဒရူး Demeter: မီဒီယာသစ်, နယူးဖြစ်နိုင်သော - ဆယ်ကျော်သက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှမ်းခြုံ & IBC 2014
အမြော်အမြင် geniuses ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC 2014 တက်ရောက်ခြင်းနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့အံ့သြဖွယ်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေမြင်နေနေစဉ်, အောင်မြင်တဲ့ရူပါရုံကိုအဘို့အသငျသညျတခုစိတ်ကူးလိုအပ်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့, စိတ်ကူးကြီးထွားရန်အဘို့အညာဘက်ကိုလေထုနှင့် မောင်း။ တိုးတက်များနှင့်တိုးချဲ့နည်းပညာများကလူတစ်ဦးတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအကွာအဝေးအသစ်ဖြစ်နိုင်ခြေခွင့်ပြုပါ။ အသစ်မီဒီယာအားလုံးကြောင်ဗီဒီယိုများနှင့်လံှု့ဆော်သောအရာများကိုလိင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဇွဲနှင့် ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိမ်းကျုံးနည်းပညာတိုးတက်မှု၏အလားအလာသော့ဖွင့်သောအရာကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာတိုးတက်ကောင်းမွန်အဖြစ်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်စာရင်းပြုစုထားသောခံရဖို့ကုန်ကျစရိတ် drop နေဆဲဖြစ်သည်။ အတွေးအခေါ်များ၏လွတ်လပ်သောလဲလှယ်မှုအတွက်အလားအလာအင်တာနက်ကိုကြီးစွာသော equalizer စေသည်။ ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုကကော်ဇောအောက်မှာစိတ်ကူးများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလှည်းဖို့အများကြီးပိုခက်ရဲ့ယခုအကြောင်း, ပိုမိုလွယ်ကူစွာဖွင့်တုန်လှုပ်စေနိုင်သည်။
အများဆုံးဆယ်ကျော်သက်အတွက်သန်းခေါင်ရေနံ X-box မှာမိမိတို့ဇာတ်ကောင်တက်အခုလဲသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစွာမိမိတို့၏လာမည့်နေ့စွဲစီစဉ်ကိုမီးရှို့ကြသောအခါတစ်ဦးထိုအချိန်တွင်ရှေး credo ဖို့သတိပေးသူအချို့ရှိပါတယ် အဆိုးအားလုံးမေ့ထားခြင်း။ ဤရွေ့ကားရှားပါးအနည်းငယ် အခွင့်ကောင်းကိုလက်မလွှတ်နဲ့သူတို့နေထိုင်အချိန်ကိုဘက်ယမ်းနှင့်ထူးချွန်ဘို့ကြိုးစားကြသည်။ အင်ဒရူး Demeter တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်၏ သူဟာအသက်ရှင်တော်မူသည်သောကပ်ကာလ၏အလားအလာများနှင့်ကျွန်တော်မရရှိနိုင်ရှိသည်နည်းပညာရှုမြင် အခုပဲ သို့သော်၎င်း၏အပြည့်အဝအလားအလာမှသုံးစွဲဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ မစ္စတာ Demeter ဟာဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ပါသည် အသက်အရွယ်အတွက် ဒါပေမဲ့ Drive ကိုများနှင့်မျှော်မှန်းချက်၌လူ။ 16 ၏မှည့်သောအဟောင်းများကိုနှစ်အရွယ်မှာသူပြီးသားကသူ့လမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့ခြင်းနှင့်လမ်းဆင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဒရူး Demeter ပထမဦးဆုံးမိမိအတိုတောင်းသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်အတူအမျိုးသားရေးအာရုံစူးစိုက်မှုဆီသို့ရောက် လာ. , "ကျွန်တော်တို့ဟာမျိုးရိုးဗီဇပြင်ဆင်ထားသောပြည်သူ့?" သူကဆယ်ကျော်သက်ယူရတံဆိပ်အောက်မှာရိုက်ကူး။ ဒါဟာ cSpan အားဖြင့် run နေတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီ link အင်ဒရူး Demeter (Bonchak 2014) အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဗီဒီယို (စာမျက်နှာ၏ထိပ်) အဘို့ဖြစ်၏။ www.news-herald.com/general-news/20140318/notre-dame-cathedral-latin-student-earns-top-honor-in-c-span-contest.
ကြောင်းပြိုင်ပွဲအနိုင်ရဘို့မိမိအဆု၏တစိတ်တပိုင်း cSpan ရဲ့ပြိုင်ပွဲများတွင်အခြားထိပ်တန်းရရှိသွားပါတယ်ဝါရှင်တန်ဒီစီမှခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူစဉ် cSpan ရဲ့ DC ကခရီးစဉ်အပေါ်မှတ်တိုင်များသူတို့ရဲ့တအိမ်တည်းလူနည်းစုခေါင်းဆောင်နှင့်အတူ Nancy Pelosi နဲ့အလည်အပတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြောင်းအင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းသူမစ္စ Pelosi တစ်ဦးအမြင်မေးခွန်းကိုမေးအားလုံးပွဲအသုံးပြုပုံသူမ၏ပြားခြေဖမ်းမိကြောင်း။ ကြည့်ရသည်မှာသူမ / မေးခွန်းတစ်ခုကိုတစ်ဦးထက်ပိုသော '' fluffy '' အင်တာဗျူးမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ကြောင်းတှေ့ဆုံလက်ပတ်နာရီ၏အကျဉ်းဗီဒီယို www.youtube.com/watch?v=St8vksfTvWw.
ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်နှင့်အချို့သောလူများ, အမြဲအဖြစ်လာမည့်ကွေးနှင့်ပြီးသားပြဋ္ဌာန်းဖို့ရွေ့လျားနေကြသည် '' လာမယ့်ကြီးမားတဲ့အရာ။ '' Demeter အများအပြားဆယ်ကျော်သက်လုပ်ပေးအဖြစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ဆယ်ရှစ်ယောက်ရဲ့အသက်အရွယ်သည်အထိမဲပေးနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်၏တားမြစ်ချက်များ, လမ်းနည်းပါးပါတယ်။ အားလုံးကိုအရမ်းမကြာခဏလာမယ့်အဆိုပါသိသာ doubletalk နှင့်ရှုပ်ထွေးပွေလီအောင်လုပ် နှစ်ခုလုံး အဆိုပါအတန်းမှာ၏နှစ်ဖက်အဖြစ်ကောင်းစွာ unnerved နှင့်အတန်ငယ်ရှုပ်ထွေးဆယ်ကျော်သက်စဉ်းစားထားသည်။ Demeter ရဲ့ရည်မှန်းချက်ယခုလုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသောနိုင်ငံရေးကိုမှာလတ်ဆတ်ကြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုဒဏ်ချက်များ၏ဆယ်ကျော်သက်များက run နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်အတွက်ပိုက်ဆံပြုစုပျိုးထောင်ဖို့စည်းရုံးရေးဖို့နေရောင်၌ဤအခိုက်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုသူလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရဲ့နိုင်ငံရေးသမားများထံမှမေးခွန်းများကိုနှိပ်အကြောင်းကိုအစစ်အမှန်အဖြေကိုရဖို့အဖြစ်ပါဝင်နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်. ငွဖြစ်ကြောင်းသူတို့အားဆယ်ကျော်သက် get ဖြစ်ပါတယ်။ ဤစီမံကိန်း Politicast ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်နှင့်သူသည်ဆယ်ကျော်သက်ယူရတံဆိပ်အောက်မှာ run ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ www.indiegogo.com/projects/politicast-the-first-news-channel-run-by-teens
Demeter ဒီတော်လှန်ရေးသမား concept ကိုနိုင်အောင်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်သာသတင်းစတူဒီယိုတည်ဆောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရန်ပုံငွေ $ 50,000 မြှင့်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူဟာလူအစုအဝေး-source အဖွဲ့အစည်းက IndieGoGo thru လူမှုမီဒီယာ၏အကူအညီမှတဆင့်ဒီကြိုးစားနေရဲ့ landing.indiegogo.com/indiegogo-basics/?r=adw_www_us_0000_adw00004_000000gg_002_2000_indiegogo&gclid=CLyf2NmwqMACFQQSMwod7T4AyQ.
အဆိုပါဝေါဟာရကို "လူအစုအဝေး-source" 2005 အတွက်စတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ လူအစုအဝေး-source ၏အယူအဆသစ်ကိုသည်မဟုတ်, ယခုလူမှုမီဒီယာကိုကျေးဇူးတင်အင်တာနက်ကနေတဆင့်ပါးအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်မှာအဆင့်ကိုနက္ခတ္တဗေဒဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့ယခုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့စတင်နေကြသည်ကျြမြားနှငျ့အခငျြးခငျြးတစျခုပါပဲ။
အဆိုပါကလေး boomers, မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက X နှင့်မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Y ကို၏ရှေးအကျဆုံး (အနှစ်တစ်ထောင်) ယခုအမှုအရာအပြေးသူများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်ယခုအချိန်အထိကမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Z ကို / Boomlets / အဆိုပါကျနော်တို့မျိုးဆက် / etc ရဲ့သေးတစ်ခု '' အရာရှိတဦးက '' နာမကိုအမှီမရှိပါ။ အနှစ်တစ်ထောင်နှင့်ဤနောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်အမှန်တကယ်ကဒီရာစု၏ပထမဆုံးကမ္ဘာကတိုင်းသူပြည်သားများ ပို. ပို. မီဒီယာ-မိုးသည်းထန်စွာယဉ်ကျေးမှုမောင်းနှင်သူများဖြစ်သွားကြသည်။ ဤမျှလောက်မတိုင်မီသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါအဟောင်းသားစဉ်မြေးဆက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်, သူတို့ရဲ့ရူပါရုံကိုပြန်ကျင်းပကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာမြန်နှုန်းအတွက်တိုးမြှင့်ပေးသည်, ထိုလူငယ်ကသူတို့စိတ်ထဲတွင်မှတ်တမ်းများ, 8-လမ်းကြောင်းတိပ်ခွေ, ခဲဓာတ်ဆီနှင့် Betamax တှကေိုဖယျရှားမရှိကြပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ကို mark ။
ကျနော်တို့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အလားအလာရှိသောမမွငျနိုငျသောအတိတ်ကာလ mired ပေမယ့်အမှတ်ကပဋိသန္ဓေနှင့် avidly ဒီဆယ်ကျော်သက်သတင်းစိတ်ကူး execute ရန်ကြိုးစားနေသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်င်ဖြစ်ပါတယ်ကြသည်မဟုတ်။ အသစ်မီဒီယာအင်တာနက်နှင့်အတူလူတိုင်းနှင့်လည်းတင်းကျပ်မဟုတ်ကြောင်းအစိုးရမှရရှိနိုင်မယ့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။
အင်ဒရူး Demeter နှင့်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များ၏ကျန်ရန်, အင်တာနက်မလိုဘဲအချိန်ရှိဖူးပါ။ ခေတ်ပညာတရားကိုဆောင်ကြဉ်းပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစုပြုံပြွတ်သိပ်နေတဲ့ဒီဂရီလာနှင့်အတူနိုင်ပါတယ်။ ငါကို double ဂဏန်းနှင့်မျှမတို့ကို PC ရဲ့ရှိခဲ့သည်တဲ့အခါအချိန်အတွက်ဓာတ်ဆီစျေးနှုန်းများသတိရပါ။ အများအပြားအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ပေမယ့်အဆိုပါလူငယ်ကျိန်းသေ, အတွေ့အကြုံရှိသူထံမှအဖိုးတန်သင်ခန်းစာများလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, မိမိတို့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာငယ်ရွယ်ထဲကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်မနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အသိပညာတစ်လမ်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ အင်တာနက်နှင့်လူမှုမီဒီယာယခုငါတို့အားလုံးကိုလမ်းညွန်ထံမှအသိပညာဆောင်ခဲ့ရမည်။ အဘယ်သူမျှမမျိုးဆက်အမြော်အမြင်အတွေးအခေါ်များအပေါ်တစ်ဦးသော့ခတ်ထားပါတယ်။ အသိပညာတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ ဤလောက၏အအင်ဒရူး Demeters ရန် - ကျွန်တော်, အသံလွှင့် Beat မှာ, 'သင်တို့ဆီသို့ပိုပါဝါ' 'ဟုပြောနှင့်' 'ကောင်းမွန်သောအလုပ်တက်စောင့်ရှောက်!'
အင်ဒရူး Demeter အသံလွှင်း လူအစုအဝေး-source cSpan ရန်ပုံငွေရှာခြင်း IBC 2014 IndiGoGo Nancy Pelosi နိုင်ငံရေး ဆယ်ကျော်သက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှမ်းခြုံ ဆယ်ကျော်သက်စတူဒီယို 2014-08-28
ယခင်: One-Stop Multichannel ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ပြသရန် IBC မှာ RRsat နှင့်အတူ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များမိတ်ဖက်
နောက်တစ်ခု: Digigram LX-IP ကို ​​RAVENNA PCIe (R) IBC2014 မှာအသံကဒ်အပေါ်နယူး MADI Option ကိုအထူးပြုလုပ်ပါရန်